Taliyihii ilaalada Madaxtooyada Puntland oo lagu dilay Gaalkacyo | Keydmedia
Taliyihii ilaalada Madaxtooyada Puntland oo lagu dilay Gaalkacyo
Dagaalka ayaa lagu dilay taliyihii ciidamada ilaalada Madaxtooyada Puntland G/sare Cusmaan Abuukar Maxamed, sidoo kalena lagu dhaawacay 7 ruux.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wararka laga helayo Waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in saaka dagaal halkaas ka dhacay lagu dilay Allaha unaxariistee taliyihii ciidamada ilaalada Madaxtoyada Puntland G/sare Cusmaan Abuukar Maxamed.
Dagaalka ayaa la sheegayaa in uu yimid kadib markii ciidamada ilaalada madaxtooyada Puntland weerar ku qaadeen Wershadda Kaabista Gaalkacyo oo ay ku sugnaayeen Maleyshiyaad hubeysan oo dagaal kala hor yimid ciidamada.
Dagaal saacado qaatay ayaa la sheegaya in uu dhex maray labada dhinac, waxaana lagu soo waramayaa in Maleyshiyadii ku sugnaa Warshadda ay ka ganacsanayeen waxyaabaha maanka dooriyo sida ay dadka deegaanka sheegayaan.
Sidoo kald ilaa 7 ruux oo labada dhinac ka kala tirsan ayaa la sheegayaa in ay dagaalka ku dhaawacmeen, walow aan dad shacab ah la soo warin, kuwaas oo dagaalka waxyeelo ka soo gaartay.
Ciidamada ilaalada madaxtooyada Puntland ayaa la sheegayaa in ay haatan si buuxda gacanta ugu hayaan amaanka Warshadda Kaabista Gaalkacyo oo maalmahaan xarun u aheyd kooxihii saaka dagaalka looga saaray oo u isticmaalayay daroogada maanka doorisa ee Khamriga.
Dagaalkaan ayaa imaanaya xilli uu dhawaanahaan waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug uu ku sugnaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ilaa iyo hadana majiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka Puntland.